Okulandelayo | Ikusasa Lomsebenzi | UCheryl Cran
Indlela Okulandelayo™ Isebenza
Kusetshenziswa amasu asemqoka ukukusiza ekuhambeni ikusasa lomsebenzi - sikusiza ukuthola ukuthi yini elandelayo inkampani yakho, abaholi bakho namaqembu akho futhi sihlele ukuthi yini okufanele yenziwe ikusasa lilungile manje.
Ngabe abaholi bakho bakulungele okulandelayo? Ngabe abaholi bakho banamakhono 'wesikhathi esizayo' ukuhola izinguquko ezidingekayo ukuze bafike lapho? Sinezixazululo ezihlanganisiwe zokusiza abaholi ukuba balungele ikusasa manje.
Ingabe amaqembu akho asekhulile futhi ayaziqamba? Sinamathuluzi okusiza amaqembu akho ukuba ahole abaholi bezinguquko abakha okulandelayo ngokuzayo.
Ingabe usomabhizinisi olungele ikusasa? Ukuthi uyibhizinisi elisunguliwe noma ungaliqala singakusiza ukuthi ubhalise okulandelayo.
Izinsizakalo zamasu esiwanikezayo
Funda ngokufunwa nangesikhathi sangempela.
Izifundo zevidiyo ezizihambisayo ezinenketho yokusebenzisa nge-NextMapping™ umqeqeshi.
Siza abaholi bakho namaqembu ukuba alungele ikusasa manje ngamakhono namasu wakamuva.
Ugqozi, ucwaningo, amasu asebenzisekayo nokuqukethwe okusika okusemqoka yilokho okutholayo uma usebenza neCheryl Cran njengesipika sakho esiphambili ngomcimbi wakho obonakalayo noma umcimbi obukhoma. Kwenziwe ngezifiso futhi kuyasebenzisana.
Izikhathi ezingaqinisekile zidinga insiza engcono kakhulu yabaholi namaqembu. Sebenza nge-NextMapping yethu eqinisekisiwe™ abaqeqeshi ukukhulisa amakhono obuholi, ukukhulisa ukucabanga kwamasu nokwenza ngcono ukusebenza kwezisebenzi ezikude.
Njengenhlangano yokubonisana yezimbali sisebenzisana namabhizinisi amancane naphakathi nosomabhizinisi ukuthola ubufakazi bebhizinisi esikhathini esizayo
futhi wakhe amathuba wokuncintisana, ukugqama emisebenzini eyiqiniso nokusebenza koshintsho lobuholi.
Ama-75% ama-CEO's akhomba ukuntuleka kwabasebenzi abanamakhono njengegebe elikhulu lokulungela ikusasa njengenhlangano.
E-NextMapping™ sinikezela ngezindlela ezahlukahlukene zokuqeqesha nezindlela zokusiza ukuvala igebe lamakhono abaholi bakho namaqembu.
Ucwaningo selutholile ukuthi abaholi nosomabhizinisi bathola ukuqonda okwengeziwe kwamasu, imibono enokusebenziseka nezisombululo ezintsha
lapho uhlanganyela emaqenjini amancane ontanga. I-NextMping yethu ekhethekile™ izimbangi zenziwa ngesicelo kuphela.
Bheka izibuyekezo zethu zakamuva
Ungakha kanjani futhi uqalise ngejubane lenguquko
Ikusasa lempumelelo yomsebenzi alincikile 'kumaqhawe' amabili noma ebhizinisini - ikusasa limayelana nokuthi 'thina' nokuthi ungasungula kanjani futhi silakhe kanjani ngejubane loshintsho.
Bhuka manje ku-50% off
Ukubaluleka kokufaka uphawu ngesikhathi sobunzima nokuthi ungayithobela kanjani ibhizinisi lakho
UCheryl uxoxa noBrad Breininger, umsunguli osebenzisana naye futhi osehola phambili eZync ngekusasa lomkhiqizo kanye nokwejwayelekile.
I-NextMapping ™ Blog - Funda kabanzi
94% kubaholi bomhlaba wonke abahlolisisiwe kukhona anelisekile ngokusebenza kwabo okusha.
77% yabasebenzi bafuna abantu kuqala - isibili ledijithali njengecebo eliyisihluthulelo lokuguqula ibhizinisi ngekusasa.
16% Kubikwa ukuthi izinkampani zikhona iphumelele ngoguquko lwedijithali imizamo.
70% yezinkampani zithi ungenzi ube nethalente elilungele ikusasa.
Abathengi abambalwa esithanda ukusebenza nabo